Ahoana ny fomba hanokafana dispenary marijuana ao Fresno CA | Fahazoandalana amin'ny rongony & FAQ
Fahazoan-dàlana famonoana ahi-dratsy any Fresno, CA
Te hahazo fahazoan-dàlana handoa vola any California ianao?
Izany no fanontaniana manontany tena ny mpandraharaha cannabis izao manontany izao fa ny tanànan'i Fresno California dia nifidy hamela ny orinasa cannabis ho ao amin'ny vondron'izy ireo. Fresno CA dia manana rafi-pandaminana feno sy antsipirihany momba ny olona tokony hanaraka amin'ny fahazoan-dàlan'ny lisansa cannabis. Azo jerena ao izany Andininy 33: BUSINESS RETAIL CANNABIS SY BUSINESS CANNABIS ao amin'ny kaody kaominaly Fresno.
5 zavatra ilainao ny fahazoan-dàlana Fresno CA cannabis orinasa.
Farany, nahazo diplaoma kely ilay Fresno California mpandala ny nentin-drazana ary nahatsapa fa tsy rongony ny rongony… .ary afaka manome vola be amin'ny hetra koa - na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, dia amporisihina izahay hanampy ny olona hahazo ny fahazoan-dàlan'ny rongony any Fresno CA satria izany no ny zavatra tianay hatao eto….
Vaovao ara-dalàna cannabis.
Azontsika atao ny mieritreritra an'i Cali ho toy ny OG an'ny rongony any Amerika sy ny fiandohan'ny indostrian'ny rongony ara-dalàna - saingy mbola mihoatra ny antsasaky ny distrika ao amin'ny fanjakana no mandrara ny zavamaniry. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2019, ny orinasa Marijuana isan'andro dia nitatitra fa ny 161 monja amin'ireo 482 monisipaly ary 24 amin'ny 58 fotsiny no mamela ny rongony ara-barotra any California - midika izany fa ny faritra repoblikana rehetra ao amin'ny fanjakana dia mbola tsy nanome lalàna azy io - na dia mety tsy izany aza. Marina 100%, ny faritra ambanivohitra sy mpandala ny nentin-drazana betsaka kokoa amin'ny fanjakana dia tsy hanaiky izany - izay mitondra antsika any Fresno!
Alohan'ny hieritreretanao ity firenena Trump ity - tsy izany - i Hillary Clinton dia nandresy tamin'ny faritany fresno tamin'ny 2016 - mampiseho fa satria demokraty no mitondra ny distrika - tsy midika izany fa tian'izy ireo ilay voninkazo. Ny prop 64 dia nandalo 1% fotsiny teo - ary 4 taona aty aoriana, dia miomana fotsiny izahay hamela ny fangatahana handeha. Na izany aza, tsy tena fanjakana mena i Kalifornia - fa ny fandraràna be dia be eraky ny fanjakana dia mampiseho ny fitsarana an-tendrony izay iadiana amintsika raha ny momba ilay zavamaniry.
Noho izany dia hataontsika ny 2 amin'ireo satria ny regs dia tsy mitovy mihitsy raha te hamboly ilay zavamaniry na mivarotra azy ianao. Ka androany dia hiresaka momba ny fomba hanokafana dispensary rongony ao Fresno California izahay.
Any California, napetrany eo afovoany ny vato fehizoro rongony - eo an-toerana avokoa izany. Ny kaominina na faritany eo an-toerana dia manana fahefana hanome alalana, avy eo aorian'ny fahazoanao ny lisansa dia mila misoratra anarana amin'ny fanjakana indray ianao Satria inona no tsara kokoa noho ny rubric iray mifehy ny lalàna mitsambikina rehefa manandrana mametaka zavamaniry izay mbola tsy namono olona tafahoatra loatra - marina izany. Rubitra mifehy 2.
Inona no ataontsika avy eo, mankany amin'ny ôrdônansy monisipaly sy ny fitsipika mifandraika amin'izany izahay avy amin'ny kaody kaominaly. Ary rehefa mihady any isika - dia tsapantsika izay mety hitranga manerana ny faritra sisa ao California rehefa ara-dalàna io - dia ho maro ny lalàna mifehy.
Firy ny fitsipika - tsara, tsy maintsy miatrika ny vokatra NIMBY eo aloha sy eo afovoany ianao. Andao isika mankany amin'ny Code of Ordonances Fresno Fizarana 15-5001 - Andininy 50 - ny fomba mahazatra. manarona ireo fomba fiasa izay iraisan'ny fangatahana fahazoan-dàlana sy fankatoavana rehetra izany - eny, mety ho fihainoana ampahibemaso izy ireo. Ary tsy maintsy manaraka azy ianao mba hahazoana ny fangatahana Fahazoan-dàlana Ampiasaina amin'ny rongony amin'ny Fresno.
Ny fangatahana Fahazoan-dàlana Ampiasaina amin'ny rongony dia miaraka amin'ny fitantarana an-tsoratra, fanambarana momba ny asa, drafitry ny tranokala, drafitra gorodona, fiakarana ary porofo hafa hanohanana ny voka-pikarohana azo ampiharina avy amin'ny tanàna. Mila fihainoana imasom-bahoaka ianao hahazoana ny fahazoan-dàlana - ary hanomezana onitra ny tanàna manohitra ny sazy na zavatra hafa miditra - izay adaladala, tadiavin'izy ireo ny volanao, fa koa arovanao izy ireo raha manapa-kevitra ny hanidy anao ny feds. Ny vondrom-piarahamonina tsara iray dia hanodina izany ary hampanantena ny hampiasa ny sasany amin'ny vola miditra amin'ny hetra hanovana ny sazy hanova ny lalàm-panorenan'izy ireo izay adala. Saingy manitsakitsaka aho. Ianao 100% dia tsy maintsy manao an'io mba hahazoana fahazoan-dàlana - ka ataovy izany, avy eo andramo ary hahitanao raha afaka mandamina andro fitsangatsanganana miaraka amin'ny kongresista sy loholonao ianao hanovana ny lalàna federaly
Andao hiditra ao amin'ny rakitsoratra sisa tavela amin'ny volavolan-dalàna momba ny fivarotana rongony ao Fresno CA. Ho hitanao fa misy ampahany efatra lehibe amin'ny fahazoan-dàlana sy ny fantsom-panafody mahazatra. Ny lalàna dia manondro anao amin'ny faritra hafa amin'ny kaody - izay misy fivoriambe fanamarihana mahaliana - Tsy maintsy mankany amin'ny Fizarana 9 - Andininy 33 amin'ny fehezan-dalàna. Ny sasany amin'ireo fizarana dia mitovy amin'ny orinasa rongony, fa ny sasany kosa mifandraika amin'ny karazana fahazoan-dàlana tadiavinao. Ohatra - mila famaritana ireo dispensary, fa koa ny fahazoan-dàlana ho an'ny rongony izay mitaky:
(1) manana fahazoan-dàlana ara-barotra valan-javamaniry azo avy amin'ny tanàna;
(2) manana fahazoan-dàlana ara-dalàna;
(3) manana fahazoan-dalàna mety amin'ny alàlan'ny Cannabis Conditions Use;
(4) ankatoavin'ny lalàna rehetra sy ny lalàna eo an-toerana amin'izao fotoana izao; ary
(5) manana taratasy fanamarinana ny fahazoan-dàlana amin'ny Cannabis Business licence.
Avy eo, mila miantoka ny famantarana, ny tranonao, ny jiro ianao ary bebe kokoa amin'ny fahazoan-dàlana hampiasaina rongony - anisan'izany ireto manaraka ireto:
Drafitra momba ny toerana
Porofo hafa fanohanana ny fitadiavana zavatra hafa takiana amin'ny fizarana 15-5306 momba ny fehezan-dalàna.
Oh, ity dia tadim-pitsipika matevina mifehy izay tadiavinay tany Illinois - fantatrao indraindray fa mieritreritra aho fa ny fahafahan'ny ekipa mitsambikina amin'ireto tadin-dalàna ireto dia misy antony 2: 1) hanaporofoana fa voalamina sy mifanaraka amin'ny leslie ianao tsy avy any valan-javaboary sy rec ary 2) hanomezana fahazoan-dàlana ho an'izay tadiaviny satria samy hikorontana ireo antontam-bato mifehy - izay mivoatra isan-taona.
Fa andao hanatona izany amin'ny haavon'ny fahatsoram-po mety hoentin'i Leslie Nope any amin'ny valan-javaboary any pawnee Indiana satria hahazoana ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy manome fahafaham-po ireo fepetra takiana tsirairay ireo ianao - noho ny & hanasongadinay:
Ny fampiasana dia natolotra ao anatin'ny distrika zoning azo ampiharina ary mifanaraka amin'ny fepetra hafa rehetra azo ampiharina amin'ity Code ity sy ny toko hafa rehetra ao amin'ny Code Munisipaly;
Ny fampiasana atolotra dia mifanaraka amin'ny Drafitra ankapobeny sy ny drafitra hafa sy ny torolàlana hafa azo ampiharina izay noraisin'ny tanàna;
Ny fampiasana ny soso-kevitra dia tsy hanimba loatra ny fahasalamam-bahoaka, ny fiarovana, na ny fitsinjovana ankapobeny ho an'ny vahoaka, ary tsy hanimba ny fananana manodidina na ny fanatsarana;
Ny famolavolana, ny toerana, ny habeny ary ny fampandehanana ny hetsika natolotra dia mifanentana amin'ny efa azo sy efa azo antenaina amin'ny alàlan'ny tany amin'ny ho avy; ary
Ny tranonkala dia mifanaraka amin'ny karazana, ny haben'ny ary ny hamafin'ny fampiasana ampiasaina, anisan'izany ny fidirana, fidirana vonjy maika, fitaovana ary serivisy ilaina; ary
Ny fampiasana dia natolotra dia mifanaraka amin'ny Drafitra Fampitoviana amin'ny fampiasana ny seranam-piaramanidina Fresno County (amin'ny alàlan'ny fanitsiana) natsangan'ny Kaomisim-piaramanidina Fampiasa any Fresno County araka ny lalàna momba ny lalàna momba ny daholobe any California 21670-21679.5.
Jereo - izany indrindra no antony mahatonga ny fahazoana fahazoan-dàlana amin'ny vola an'aliny dolara ary maro amin'ny tsenan'i California no mety misafidy ny hijanona eo amin'ny tsenan'ny lova - tsy maintsy miady amin'ny stigma manohitra ny zavamaniry isika mba hahamora azy. hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny alikaola toy ny fahazoana fahazoan-dàlana rongony. Fa andao indray mandeha indray mandeha ary miverina amin'ny lalàna fanampiny ilain'ny dispensary rongony ao Fresno California - miverina amin'ny andininy faha-33 amin'ilay kaody:
Tokony hanaraka izany ianao:
Andininy 33 rehetra - hotanisainay ireo ho an'ny dispensaries:
Fanarahana ny lase 9-3303
Fahazoan-dàlana ilaina amin'ny orinasa - 9-3305
Fepetra farany ambony - 9-3306
Toerana sy endrika ho an'ny fivarotana cannabis 9-3307
Fepetra ilaina amin'ny asa fandraharahana cannabis rehetra 9-3309
Ary ny iray lehibe - req miasa amin'ny fivarotana rongony - 9-3310
Fa aza adino ny fitoviana ara-tsosialy - izany amin'ny fomba fampiharana voalohany amin'ny 9-3316.
Mazava ho azy fa misy bebe kokoa, toy ny fandraràna, ny fanavaozana, ny fanovana eo amin'ny toerana, ny fomba fampiharana voalohany, ny firaketana an-tsoratra ary ny fitandremana firaketana,
Avy eo, ny didim-panjakana mihitsy dia mandeha lavitra miaraka amin'ny fitoviana ara-tsosialy ary koa ny drafitry ny andraikitry ny manodidina. Ireo drafitra ireo dia nalevina tao amin'ireo fizarana izay notanisiko teo aloha - mandeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa izy ireo momba ny drafitry ny manodidina anao, ny drafitry ny fiarovana anao araka ny takian'ny drafitry ny asa sy ny fitoviana ara-tsosialy toy ny amin'ny fizotran'ny fampiharana voalohany.
Ny lafiny ara-tsosialy ara-tsosialy momba ny fahazoan-dàlana dia mitaky ny kely indrindra amin'ny karazan'olona sasany izay tsy voaporofo ara-tantara, fifanarahana fandriam-pahalemana amin'ny asa, drafitra andraikitra momba ny fiaraha-monina, ary na dia ny fangatahana ara-tsosialy ara-tsosialy aza izay manana farafahakeliny farafahakeliny 1 amin'ireo fangatahana 7 natao hatrizay. .
Ka any ianao no mandeha - afaka nandany antsasak'adiny aho nanadihady ny lahatsoratra mivantana amin'ity paikadin'ny fahazoan-dàlana tena sarotra nataon'i Fresno ity - ary angamba ny tanàna manaraka any California manana fahazoan-dàlana hivarotra rongony. Ireo faritra sisa tavela ao amin'ny fanjakana dia mpandala ny nentin-drazana avokoa, izay midika ho fanaraha-maso bebe kokoa - ka raha mila fanampiana ianao - potehio ny tianao ary misoratra anarana, avy eo mifandraisa amiko ao amin'ny lozisialy mariju.com. Miaraka amin'ny fanampianao dia afaka manohy mamadika maitso an'i California izahay.
* Miggy at Vaovao ara-dalàna cannabis
Na izany no olan'ny fampiasanao tany voalohany na vao haingana indrindra, dia nanampy ny olona sy ny orinasa ny birao.
Tadiavo ny toerana misy ahy